Afarta codsi ee ugufiican ee xakameynta waalidka ee Android | Androidsis
Tirada carruurta isticmaalaysa aaladda Android, ha ahaato kiniin ama taleefan, ayaa sii kordheysa. In kasta oo aysan had iyo jeer ahayn ikhtiyaarka ugu fiican, haddana waa isbeddel ku socda xawaare adduunka oo dhan ku socda. Xaaladahaas oo kale, waa wax iska caadi ah waalidiinta inay doortaan inay ku rakibaan xakameynta waalidka aaladdaas. Waxaa jira sababo dhowr ah oo loo isticmaalo, sidaan horeyba kuugu sheegnay.
Si loo maareeyo xakameynta waalidnimo ee qalabka Android ee su'aasha ah, waxaan fursad u leenahay inaan ku isticmaalno codsiyada. Iyaga oo ku mahadsan iyaga ayaa runtii sahlanaan kara in la maareeyo dhinacyadan. Sidaa darteed, hoosta waxaan ka hadli doonaa codsiyada ugu fiican ee ku jira qaybtaan.
1 Kaspersky SafeKids - Habka Carruurta
2 Norton Qoyska xakameynta
3 Waqtiga Shaashadda Xakamaynta Waalidka
4 Qolof Kid
Kaspersky SafeKids - Habka Carruurta
Waxaan ku bilaabeynaa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee aan maanta heli karno. Waa codsi fuliya hawl laba-geesood ah oo ku saabsan Android. Tan iyo markii dhinac laga eego Waxay u oggolaaneysaa xaddidaadda marin u helidda carruurta barnaamijyada qaarkood ama bogagga internetka. Haddii ay oggolaadaan, waxay farriin noogu soo diri doonaan taleefanka oo ay la socdaan digniin, si aan u ogaanno meesha uu ku sugan yahay wiilkeennu. In kasta oo shaqadan lagu heli karo nooca ugu sarreeya ee barnaamijka.
Waa codsi xakameyn waalidnimo oo wanaagsan. Naqshadeedu runtii way fududahay in la isticmaalo, oo ufiican xitaa waalidiinta aan aqoon badan u lahayn arimahan. Waxaan kala dooran karnaa nooc bilaash ah, oo aad u dhameystiran, ama nooca la bixiyay. Ku soo degsashada barnaamijka laftiisa Android waa bilaash.
Kaspersky SafeKids oo wata GPS
Norton Qoyska xakameynta
Fayras kale oo isna bilaabay barnaamijkiisa xakameynta waalidnimo. Thanks to barnaamijkan waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ka horjoogsanno carruurta inay booqdaan bogagga qaarkood, ilaa aan ka nahay kuwa aan u fasaxno in la soo galo mooyee. Intaa waxaa sii dheer, waxaan awoodi doonaa inaan la socono taariikhda daalacashada, waqtiga lagu qaatay bog kasta ama kormeerida shabakadaha bulshada. Codsi wanaagsan, aad u dhameystiran oo leh is dhexgal wanaagsan oo ka dhigaya adeegsiga wax run ahaantii fudud.
Ku soo degsashada arjiga on Android waa lacag la'aan. Waxaan ku tijaabin karnaa bilaash, inkasta oo haddii aan rabno rukhsad, waa inaan bixinnaa lacag, sanadle ama bille.
Waqtiga Shaashadda Xakamaynta Waalidka
Codsiga saddexaad ee liistadani xoogaa wuu ka duwan yahay, maaddaama ay na siinayso hawlo kale, laakiin aan haysanno furayaasha xakameynta waalidka. Thanks iyada waan awoodi doonaa xakamaynta iyo sidoo kale xaddid waqtiga ay carruurtu isticmaalaan taleefanka ama kiniinka. Intaas waxaa sii dheer, waxaan fursad u lahaan doonnaa inaan joojino cayaaraha waqtiyada qaarkood, sida waqtiga jiifka ama shaqada guriga. Sidoo kale waa suurtagal in la xannibo codsiyada warbaahinta bulshada. Si loogu dhiirrigeliyo carruurta inay qabtaan shaqadooda guriga, markay sameeyaan, waxay heli doonaan abaalmarinno taxane ah. Hab si fiican uga shaqeyn kara xaalado badan. Waxay leedahay naqshad wanaagsan, oo aan lahayn dhibaatooyin badan, taas oo sahlaysa in la isticmaalo.
U soo degsashada codsigan loogu talagalay Android waa bilaash. Gudaha waxaan ka helnaa wax iibsi, si aan ugu helno howlo dheeri ah dhexdeeda ama aan ku sharadno rukumadda, oo leh shaqooyin la sheegay.
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan arimahan, oo aan ka maqnaan karin liiska. Waa launcher aan awoodno u qaabee si dhab ah oo fudud si looga ilaaliyo in ilmaheena helo waxyaabaha qaarkoodAma shabakadda ama qaab codsi. Si fiican ayey ugu shaqeysaa dareenkan waxayna noo ogolaaneysaa inaan xakameyno waxa cunugu ku sameeyo aaladooda, taas oo ah mid ka mid ah ujeeddooyinka aasaasiga ah ee codsigan. Si aan ugu galno qaabka waalidka, waa inaan xallino hawl xisaabeed, oo aan tan ugu fiicneyn, maadaama cunug leh kalkuleytar uu xallin karo. Haddii kale, barnaamij wanaagsan.
U soo degsashada codsigan loogu talagalay Android waa bilaash. Gudaha gudaheeda waxaan ku leenahay wax iibsasho, si aan uga helno howlo dheeri ah koontada caymiska. Nooca bilaashka ahi wuu ka badan yahay intaas.
Kid's Shell - kidcher kid - xakameynta waalidka
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Barnaamijyada xakamaynta waalidka ee ugu wanaagsan Android